Hakan Larsson /”ore Properties”: amaxwebhu enkohliso kwiBhodi Imfuduko, lungqamane F-rhafu kunye negama elitsha lenkampani | Holmbygden.se
posted on 28 EyeNkanga, 2015 yi Holmbygden.se
ngoku ulungiselela ngamandla ukufumana naliphi na ixesha lokufumana iimbacu Stendahls skandalhus. Nangona ekhula scandal kunye izitenxo ziya kuqhubeka kumnini omtsha Hakan Larsson e Örebro, ngoku sokubambisana arhente Stendahs. Emva Ukuphika lothungelwano Johan Stendahl kutyhilwa Swedish Television News Västernorrland, oko kuvela amathandabuzo ngoku ezininzi ezintsha:
izatifikethi False kuthunyelwe izicelo kwiBhodi Imfuduko.
Kwakhona, igama ubunini utshintsho.
Lungqamane F-irhafu iinkampani hakan Larsson.
Amanga ekuthatheni ukuqhagamshelana club lezemidlalo bendawo.
Ngaphandle kwezicwangciso imvume mvume / isakhiwo yokuhlala abhace.
izicelo isiqinisekiso Fake kwiBhodi Imfuduko
Hakan Larsson and Johan Stendahl igqwetha zabathetheleli kwezomthetho Michael Sterner zingeniswe isiqinisekiso umoya wobuxoki kwiipropati i Anundgård e ubhido lwazo kwiBhodi Imfuduko ukufumana imvume. Le umoya izilawuli evela kwinkampani ngaphandle irhafu F kunye ngaphandle igunya ukuze zihlolwe. Iipropati zokuhlala echaphazelekayo kwakhona bayayazi na umhloli ayengekho ezindlini zabo leyo kuthiwa abahlola imithetho elandelwayo.
Michael Sterner wayefana Stendahl njengokuba nayo 2013 kaloku ke kungeniswe amaxwebhu lobuxoki ngenxa izakhiwo ngomlilo ukhuseleko kwiBhodi Imfuduko. Kwaba Rescue Medelpad ngoko kakhulu kucacile ukuba baxoka.
Kwakhona, igama ubunini utshintsho – hayi “ore Properties”
Kanye ngexesha ukuthengwa indawo yokhuseleko 2013 shintsha “Stendahl skandalhus” umnini entsha ephepheni “irenti” iinkampani – izibhengezo Aros Energy eliphethwe umhlobo ka uJohan Stendahl. Ngokufanayo, okokugqibela zasebusika xa omnye umhlobo ka Stendahl, Hakan Larsson uthenge iipropati. Hakan Larsson wathabatha, ke, ngoxa izibhengezo Aros Energy kunye Johan Stendahls ummeli osemthethweni njengomlawuli kuphela.
Ngoku igama, Noko ke, ukususela hakan Larsson Bilkonsult AB Ore Fastigheter AB. Ukuba isizathu kukuba Hakan Larssons ihlangene Stendahl evuliwe akukacaci.
Lungqamane tax F
Emva kokuba izixa yembali yekhredithi, amatyala ngabi nankathalo ngoku Skatteverket wamngenisa F-lerhafu yenkampani hakan Larsson Aros Energy izibhengezo. Nangona lo Johan Stendahls igqwetha Michael Sterner ohleli phezu kwiBhodi.
Trock det, zonke rejections zangaphambili liSebe leeNkonzo Immigration kunye nonxibelelwano ukuze uJohan Stendahl, unetyala Swedish State ikota a billion, ukufumana hakan Larsson Bilkonsult ukusuka Örebro utyikitye isivumelwano kunye Swedish Imfuduko iBhodi kunye nezindlu scandal yokuhlala yabagula ngengqondo evulekileyo.
Amanga ekuthatheni ukuqhagamshelana club lezemidlalo bendawo
Xa hakan Larsson wayeza ukuchaza iingcambu zawo e Holm, wabhala ukuba wenza ukunxibelelana iiklabhu zemidlalo zengingqi. Oku uyaphikisana Holm Sportklubb, xa namnye kuye kwebala malunga nayiphi na indawo yokhuseleko. Yaye ukuba naluphi na ulwazi kwaziswa belali okanye emfutshane umbutho.
Ngaphandle imvume yocwangciso / imvume yokwakha
It has akukho mvume zokwakha ukusebenza indawo yokhuseleko iimpahla zazo. Ngokwesiqhelo kufuneka imvume yocwangciso okanye isicelo lesakhiwo ukutshintsha ukusetyenziswa kwesakhiwo, oko kukuthi, xa uhamba ukusuka umsebenzi enye ukuya kwenye.
Refugee yokuhlala ukuze bahlale ndawonye nabanye abazi ukuba uza kuhlangabezana neemfuneko ze Building Regulations for the imisebenzi.